Skin Tone အလိုက် အရောင်ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် နှစ်သစ်ကူးသီချင်းလက်ဆောင်
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:45 PM ဆံပင်
တခါ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ဆံပင်ဆိုးထားတာ တော်တော်လှလို့ သူ့ အရောင်လို လိုက်ဆိုးကာမှ လူက အရောင်က မထွက်တော့ပဲ မွဲခြောက်ခြောက်ကြီးဖြစ်သွားဖူးတယ်။ ဆံပင်အရောင်က တစ်ယောက်မှာလှနေပေမယ့် တစ်ယောက်မှာ လှချင်မှလှတာ။ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လိုအရောင်လေးတွေ လိုက်ဖက်မလဲဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
Skin tone နဲ့လိုက်မယ့်အရောင်များ
Skin tone ကို cool undertone နဲ့ warm undertone ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။ ဖြူတဲ့သူမှာလည်း cool နဲ့ warm ရှိသလို ညိုတဲ့သူမှာလည်း warm နဲ့ cool ရှိပါတယ်။
1) လက်ကောက်ဝတ်က သွေးကြောလေးတွေကိုကြည့်လို့ စိမ်းနေတာများရင်warm undertone ဖြစ်ပြီး၊အပြာ/ခရမ်းရင့်ရောင် သမ်းနေတာများရင် cool undertone ဖြစ်ပါတယ်။
2) ရွှေရောင်လက်ဝတ်လက်စားနဲ့လိုက်ရင် warm ဖြစ်ပြီး ငွေရောင်လက်ဝတ်လက်စားနဲ့ ပိုလိုက်နေရင် cool undertone ဖြစ်ပါတယ်။
3) များသောအားဖြင့် အသားအရောင် အဝါဘက်သန်းတဲ့သူများက warm undertone နဲ့၊ ပန်းရောင်ဘက်သန်းတဲ့သူများက cool undertone ဖြစ်ကြပါတယ်။
Wam Undertone ပိုင်ရှင်များ
Cool Untertone ပိုင်ရှင်များ
Warm undertone -
Deep brown with gold or red highlights, Red, Strawberry Blond, Gray-Yellow, Natural Golden Blond
Cook undertone -
Blue black, Deep brown, Ash brown, Ash Blond, Platinum Blond
ရှောင်ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန် အရောင်များ
# ဖြူတဲ့ အသားအရောင် ဆိုရင် ဘာအရောင်နဲ့မဆိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။
#ပန်းရောင်သန်းတဲ့အသားအရေဆိုရင် အနီတို့ ရွှေရောင်တို့ကိုရှောင်ပါ။ မျက်နာကိုအရောင်ပိုပြီး နီအန်းအန်းကြီးဖြစ်စေပါတယ်။
#အသားအဝါရောင် ရှိသူများက လိမ်မော်၊ အဝါနဲ့ ရွှေရောင်ကို ရှောင်ရပါမယ်။ အနီရင့်ရောင်နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ #အညိုရောင်ရှိသူများကတော့ အရောင်နုတွေကို မရွေးပဲ အရောင်ရင့်လေးတွေကိုသာ ရွေးစေချင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးက နားအနားက ဆံပင်စနည်းနည်းကို ယူပြီးအရင်ဆိုးကြည့်လို့ အဆင်ပြေမှ တစ်ခေါင်းလုံးဆိုးတာပိုကောင်းပါတယ်။ အချိန်မီချုပ်၊ အစုတ်သက်သာပေါ့။
့လိုက်ဖတ်တဲ့ မိတ်ကပ်၊ အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင် အရောင်တွေ
နှစ်ကုန်ခါနီး အမှတ်တရ ကိုယ်တိုင်ဟစ်ထားတဲ့ Wet Wet Wet ရဲ့ Love is all around သီချင်းလေးပါ။ ၂၀၁၁ တစ်နှစ်လုံးက ပုံလေးတွေကိုစုပြီး slide show အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။ သည်းခံပြီး နားသောတ ဆင်ကြပါကုန်။ :P
Happy Newyear 2012 **
ရင်ထိုး နှင့် စတိုင်လ် ထုတ်စရာ
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:21 AM ဖက်ရှင်
ရင်ထိုးတစ်စုံဟာ မရှိမဖြစ် ပျိုမေတို့ရဲ့ အဝတ်ဗီရိုထည်မှာ ရှိသင့်တဲ့ accessories တစ်ခုပါ။ ဘယ်လောက်ရိုးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အဝတ်အစားပဲဝတ်နေနေ၊ ရင်ထိုးတပ်လိုက်တဲ့အခါ တမူထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတာ အမှန်ပါပဲ။
တခါကလေ၊ လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ ရင်ထိုးတစ်စုံ ဆောင်ထားရင် ရုတ်တရက်ကြီး အလုပ်အပြန် သွားစရာပွဲတွေ ကြုံတဲ့အခါ၊ Day to Night အသွင်ကိုချက်ချင်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ရင်ထိုးလှလှလေးတစ်စုံ ထိုးထားခြင်းက၊ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း တက်စေပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ရင်ထိုးကို အကျီ အတွန့်လေးတွေ စုတဲ့နေရာမှာ ထိုးတတ်ကြပါတယ်။ မီရှဲလ် အိုဘားမား က သူ့ပုခုံးထောင့် အတွန့်လေးတွေဆုံတဲ့နေရာမှာ ထိုးထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အဲလစ်ဇဘက်သ် ဘုရင်မကြီး ငယ်ငယ်တုန်းကပါ။ ကုတ်အကျီ ကော်လာမှာ ရင်ထိုးထိုးတဲ့စတိုင်လ်။
ဒါမျိုးကတော့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ထိုးနေကျပုံစံလေးပါ။ လည်ပင်းဟိုက်လေးတွေ ဝတ်ရင် တွယ်တတ်ကြပါတယ်။
ခါးဘေးမှာ ချိတ်ခြင်းအားဖြင့် ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ အချိုးအစားအလှကို ပိုပေါ်လွင်စေနိုင်ပါတယ်။ စကတ် ခါးလိုင်းမှာဖြစ်စေ၊ ဖဲသားခါးပတ်မှာဖြစ်စေ၊ တပ်ပြီး အမြင်အသစ် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ ရဲ့ Bodice အလယ်မှာ ထိုးထားတာပါ။ Clevage ကို ပိုပြီး သတိထားမိစေပါတယ်။
ဒီလို ရင်ထိုးလေးတွေ အများကြီးတွယ်ပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါး လူငယ်ဖက်ရှင်ကျတဲ့ စတိုင်လ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ( နည်းနည်းတော့ ကြောင်သလားလို့နော်၊ celebrities တွေနဲ့ပဲ ကိုက်မယ်ထင်တယ်)
Silk Scarf က လူကြီးဆန်တဲ့ အသွင်ဆောင်ပေမယ့် ရင်ထိုးထပ်တွယ်လိုက်တဲ့အခါ ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့အသွင်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မာဖလာ အပြားအသေးကို ဘေးတစောင်းလေး။
ဒါ့အပြင် ဦးထုပ်၊ ဆွဲကြိုး၊ လက်ပွေ့အိတ်၊ ခေါင်းစည်းကြိုး စတဲ့ အသုံးဆောင်တွေ နဲ့တွဲပြီး စိတ်ကူးရှိသလို အလှဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ရင်ထိုးကို ရွေးမယ်ဆိုရင် --
သူငယ်ချင်းကို ထင်မြင်ချက် မေးပါ။
ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့မဆို လိုက်ဖက်မယ့် ရင်ထိုးမျိုးကိုရွေးပါ။
ဒီဆောင်းပါးလေးက ပျိုမေတို့ ဖက်ရှင်စတိုင်လ် အတွက် အထောက်ကူပြုလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:54 PM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
ဒီလိုအချိန်၊ တစ်ယောက်တည်း နေရတာ ပထမဆုံးပဲ။ အိမ်ကိုလွမ်းတယ်။ ...
ပထမဆုံးကြုံဖူးတဲ့ Christmas က ၃နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အမေက မြတ်ကြည်ကို ၂နှစ်တည်းက နားယဉ်အောင်ဆိုပြီး ဆရာမကြီးတစ်ယောက်ကို ခေါ်သင်တာ။ ကြိုးစားချက်က ဆရာမကြီးရောက်တာနဲ့ သူ့ပေါင်ပေါ်မှာ အိပ်တော့တာပဲ။ သူက ဝမ်း တူး သရီး ဖိုး .. ဆိုပြီး .. တန်း .. တောင်မရောက်ဘူး။ အိပ်သွားရော။ ဆရာမကြီးက ခရစ်ယာန်။ ခရစ်စမတ်စ်ရောက်တိုင်း အိမ်လုံးကျွတ်သွားစားကြတာ။ သူတို့ဆီက ဒိုဒိုနဲ့ ငှက်ပျောသီးဆနွန်းမကင်း ကောင်းမှကောင်း။
ပြီးတော့ ခရစ်စမတ်စ် သစ်ပင် အိမ်မှာရှိတယ်။ ခေါက်ပြီးသိမ်းထားရတာ။ အိမ်မှာက အဖွားနဲ့နေတာဆိုတော့ အမေအလုပ်သွားရင် အဖွားနဲ့ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ ခရစ်စမတ်စ် မရောက်လည်း ကြည့်ချင်တယ်၊ ကြည့်ချင်တယ်ဆို အဖွားက သိမ်းထားတဲ့ သေတ္တာကြီးကိုချ၊ ကိုယ်ကအလှဆင်တဲ့ တန်ဆာပလာ၊ ခေါင်းလောင်းတို့၊ candy cane တို့ကိုထုတ်ဆော့၊ ဆော့လို့ဝရင် အဖွားကပြန်သိမ်း၊ အဲလိုဆိုးတာ။
ငယ်ငယ်က ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံ အခုထိ အဖွားက သိမ်းထားတုန်းပဲ။ ခရစ်စမတ်စ် tree ရယ်၊ Santa က မိုးပေါ်ကနေ လှည်းကြီးနဲ့ဆင်းလာ။ အောက်မှာက ဝလုံးနှစ်လုံးရယ်၊ တုတ်ချောင်းလက်တိုတိုလေးတွေနဲ့ လူလေးတွေပေါ့။ အဲလူလေးတွေထဲမှာယောက္ခမ ကြီးဆိုပြီးသပ်သပ် ပါတယ်။ :P
ပိစိက ဇီဇာကြောင်တာ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ခရစ်စမတ်စ်နားရောက်ရင် Carol singing တွေလာကြရော။ တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ပေါ့။ အဲဒါလေ၊ Jingle Bells သီချင်းရောက်ရင် ဘယ်လို ရစ်သလဲဆိုတော့၊ သမီး သီချင်းကို ဘာလို့သူများတွေကဆိုနေကြတာလဲ၊ သွားပြီး ရပ်ခိုင်း။ မရဘူး။ ရပ်ခိုင်းပေး ဆိုပြီး ထိုင်အော်နေတော့တာ။ ကန်ထရိုက်လည်းယူထားတာမှ မဟုတ်ပဲနော်၊ ဘယ်လိုသွားပြောလို့ရမလဲ။ ဒီအိမ်ပေါ်သို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်စေသော်.. ဆိုရင်တော့ ရပ်သွားတယ်။ .. hik hik :D
(ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ့်လိုပဲ ဆိုးရင်တော့ မတွေးရဲစရာ)
ခရစ်စမတ်စ်ရောက်ရင် အိမ်မှာ မိသားစုတွေစုပြီး အသားကင်စားကြတယ်။ Champagne သောက်ကြတယ်။ ဘာစတိုင်လည်းတော့မသိဘူး။ ရိုးရာဖြစ်နေပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း လာစားကြတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာလည်း ခရစ်စမတ်စ်လုပ်တယ်။ သူတို့အိမ်မှာလာတဲ့သူတိုင်းကို လက်ဆောင်ဖောက်ပေးတော့၊ နှစ်တိုင်းလိုလိုသွားဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် ဖဲရိုက်ကြရော။
ဒီဇင်ဘာက လတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ရန်ကုန်ရာသီဥတုက အဲလိုအချိန်ကျမှ နေသာထိုင်သာရှိတာ။ ဒီဇင်ဘာရောက်ရင် ခရီးသွားဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မိသားစုနဲ့၊ ကြီးလာတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့။ မှတ်မိသေးတယ်၊ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ tequilla shot ချကြတာ။ ထပ်ခိုးပေါ်မှာ ဘီယာရယ် ဂစ်တာရယ်၊ ဂဏန်းခွက်ကြော်ရယ်။
ဒီနှစ်တော့၊ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပါပဲ၊ တစ်ယောက်တည်းပါပဲ။ မနေ့က ကျောင်းကညီမလေးတွေ ပြန်ကြမှာ လူကြုံရှိတာနဲ့ greeting ကတ်နှစ်ကတ်ဝယ်ပြီး ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ စာထိုင်ရေးရင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းလာတယ်။ Hot Choco ခွက် လေးသာ ကိုယ့်ရဲ့အဖော်ပေါ့။ ကိုယ့်ဘေးမှာသူပဲရှိတယ်။
ပိတ်ရက်လည်းမရှိဘူး။ Christmas, Newyear နှစ်ခုလုံးက တနင်္ဂနွေ၊ ဘာနိုင်ငံကြီးလဲ? (ပေါက်ကွဲလာပြီ)
သို့ပေမယ့် သို့ပေမယ့်ပေါ့လေ။ ကိုယ့်အခန်းလေး ဟိုဟာလေးဝယ်၊ ဒီဟာလေးဝယ်နဲ့ အလှဆင်နေတယ်။ Christmas အငွေ့အသက် ရှိ အောင်လို့။
အားလုံး Happy Holidays ပါရှင်။ ^^
By **~ မြတ်ကြည်~** 4:09 AM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
အသားကိုဖြူစေတဲ့ အလှကုန်အများစုမှာ မယ်လနင် (melanin) ကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ဆဲလ်တွေကို သေစေနိုင်တဲ့ hydroquinone ဒါမှမဟုတ် mercury ပါဝင်ကြပါတယ်။ အနည်းငယ်ဆို ကိစ္စမရှိပေမယ့် အချိန်ကြာကြာသုံးစွဲလာရင်တော့ လူခန္ဒာကိုယ်ကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ယခင် CNN နဲ့ အမျိုးသမီး မဂ္ဂဇင်း တချို့မှာ editior လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး သဘာဝအလှကုန် Petite Marie Organics ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Julie Gabirel ရေးတဲ့ The Green Beauty Guide မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသားဖြူစေရုံသာမကပဲ မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အစက်အပျောက်၊အမာရွတ်တွေကိုလည်း မှိန်စေနိုင်ပါတယ်။
ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
သံပုရာရည် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၄ဇွန်း
ဒိန်ချဉ် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
ကြက်ဥတစ်လုံး (အကာ) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သမအောင်မွှေပြီးရင် မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်စောင့်ပြီး ရေကြက်သီးနွေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။ လက်ကျန်ကို ရေခဲသတ္တာထဲမှာ တစ်ပတ်စာလောက် သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
သံပုရာသီးနဲ့ ဒိန်ချဉ်က အစက်အပျောက်နဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကြက်ဥအကာက အသားအရည်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပျားရည်ကတော့ ရောဂါပိုးတွေကို သေစေနိုင်ပြီး အသားကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေမှာပါ။
၈ ကြိမ်လောက်လုပ်ပြီးရင်၊ ထူးခြားချက်ကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. :)
ဒီနေ့ရွ ထပြီး ဆံပင်သွားညှပ်လိုက်တာ၊ ပုံဆိုးပန်းဆိုးဖြစ်သွားတယ်။
စာလုပ်စရာတွေ တောင်ပုံရာပုံဖြစ်နေလို့၊ ဆောင်းပါးလေးတွေ အတင်ကျဲနေပါတယ်။ အသစ်တင်တာမရှိလို့ စာဖတ်သူတွေ စိမ်းသွားမှာစိုးတယ်။ အချိန်ရရင်တော့ ရသလို၊ တင်ပေးသွားမှာပါ။
သနပ်ခါးမေ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအားလုံး Sweet december ပါရှင်။
BB Cream: ကိုရီးယား မင်းသမီးများရဲ့ အသားအရေ အလှ လျှို့ဝှက်ချက်
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:00 PM ကိုရီးယား, အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
ကိုရီးယားမလေးတွေ အသားအရေလှကြတာကို ကိုရီးယား ဒရာမားကားတွေကြည့်ဖူးသူတိုင်း သတိထားမိကြမှာပါ။ ကျွန်မ ဒီရောက်တော့လည်း အကုန်လုံးက အသားအရေလှမှလှ၊ မျိုးရိုးကြောင့်လားပေါ့။ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ မျက်နှာအသားအရေ အဲလို လှပနေတာ BB cream ကြောင့်ပါ။
ကိုရီးယားအလှကုန် ကုမ္ပဏီတွေကနေ BB cream လို့ ခေါ်တဲ့ Blemish cream ကို 2005 မှ စပြီး အာရှမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ BB cream ကို အရင်တုန်းက laser surgery လုပ်ထားတဲ့သူတွေ၊ အသားပြန်တက်အောင်၊ အရောင်ကျပြီး မြန်မြန်သက်သာအောင်၊ laser ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်မထင်အောင် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
Laser surgery လုပ်ထားတဲ့ Korean Celebrities တွေက ဒီ BBcream ကို မိတ်ကပ်အနေနဲ့ စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ကိုရီးယားအလှကုန်ကုမ္ပဏီများက အများသူငှါဝယ်သုံးလို့ရနိုင်တဲ့ BB cream ကို အပြိုင်အဆိုင် ဈေးကွက်ထဲကို ဖြန့်ချိလာ ကြပါတယ်။ ကိုရီးယားမင်းသမီး ဆောင်းဟေဂျို (အွန်စော) က BBcream အသုံးပြုကြောင်း စပြီး ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟ ခဲ့သူပါ။
ဈေးကွက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ BBcream တွေက လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကတော့ ဝက်ခြံထွက်တတ်တဲ့ပျိုမေတွေရယ်၊ sensitve ဖြစ်တဲ့ အသားအရေ (ဥပမာ နေရောင်ထဲရောက်တာနဲ့ မျက်နှာရဲတက်လာတဲ့သူတွေ) အတွက်ပါ။ သူ့ကို skin-care အတွက်ရော၊ မိတ်ကပ်အတွက် ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းပေးသလို မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အမဲစက်၊ အမာရွတ်တွေကိုလည်း မှိန်စေပါတယ်။
မိတ်ကပ်မလိမ်းထားပဲ နဂိုလှနေတဲ့ အသွင်ရရှိစေပါတယ်။
သူ့လိမ်းထားရင် foundation ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ချွေးပေါက်လည်း မပိတ်ပါ။
မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အစက်အပျောက်၊ ဝက်ခြံ အမာရွတ်စတာတွေကို မသိသာအောင် ဖုံးပေးပါတယ်။
အသားအရေကို regenerate ဖြစ်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ နုပျိုအောင်ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ကကြီးမတိုင်းလှနေတာကို မြင်ရတာ အသည်းယားလွန်းလို့မေးကြည့်တာ။ ကိုယ်လည်းသူတို့လိုလှချင်တာကိုးလို့။
BB cream, BBcream, Blemish Balm ကို အမြဲသုံးစွဲလို့ပါ၊ အစ်မကြီးရာ" တဲ့။ ဟီဟိ (ပေါပါပေ့)
ကျွန်မဆီမှာရှိတာက Bobbi Brown တံဆိပ်ပါ။ သုံးရတာ တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါလေး လိမ်းထားလိုက်ရင် Foundation မလို၊ Moisturizer မလို၊ Sunscreen မလို။
ရိုးရိုးပုံနဲ့၊ လိမ်းထားတဲ့ပုံ (ကွာတာတော့ကွာတယ်နော်)
ဒီမှာ BBcream ဆို Nature Republic က နာမည်ကြီးပါတယ်။ အခု ကိုရီးယား အလှကုန်များတင်မဟုတ်ပါဘူး။အနောက်နိုင်ငံ အလှကုန် ကုမ္ပဏီတွေ (E.g. Garnier, Lancome, Mac) လည်း နောက်ကောက်မကျအောင် အမှီလိုက်ပြီး ထုတ်လုပ်နေကြပါပြီ။ တကယ်ကောင်းတာမို့ စာဖတ်သူပျိုမေတွေ အဆင်ပြေမယ်ဆို စမ်းဝယ် ပြီး သုံးကြည့်ဖို့ လမ်းညွှန်လိုက်ပါရစေ။
ခရမ်းရောင် smokey eye ခြယ်နည်း
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:58 PM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
Smokey Eye ဆို အမဲရောင်ခြယ်ကြတာများလို့ ဒီတစ်ခေါက် အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် ခရမ်းရောင်လေးကိုရွေးထားပါတယ်။ တစ်ဆင့်ချင်းဆိုတော့ ကြည့်ရတာလွယ်ကူမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်။ အခု tutorial လေးကို http://www.makeupforlife.net မှယူပါတယ်။
အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Eye-primer ကို မျက်ခွံမှာအရင် ထည့်ပါတယ်။ ထည့်ခြင်းဖြင့် မျက်ခွံပေါ်မှာ ပို ကြာကြာခံပြီး ဘူးမှာ ပြထားတဲ့ အရောင်အတိုင်း ရစေမှာပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့က ခရင်မ်ရှဲဒိုး ခဲရောင်ကို မျက်ခွံတစ်ခုလုံးမှာခြယ်ပါတယ်။ ခဲရောင်အစား အခြားအရောင်တွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်ထည့်မယ့် shadow မှာပါတဲ့ glitter တွေ မပြန့်ကျစေဖို့ပါ။
Glitter အလက်ပါတဲ့ အမဲရောင်ရှဲဒိုးကို ခုန cream shadow အတိုင်း ထပ်ခြယ်ပါတယ်။
ပြီးရင် shadow အမဲရောင်အမှိန် နဲ့ ခုနခြယ်ထားတဲ့ glitter shadow ရဲ့အပေါ်ရယ်၊ မျက်လုံးထောင့် ဘေးစွန်းရယ်ကို အနားလိုက်သတ်ပါ။ မျက်အိမ်ကျဉ်းတဲ့သူတွေဆိုရင်၊ ဘေးသားကိုနည်းနည်းပိုယူပေးရပါမယ်။
မျက်ခုံးရိုးပေါ်စေဖို့highlight အဖြူရောင် နဲ့ မျက်ခုံးအောက် အပြင်ထောင့်ကို ခြယ်ပါတယ်။
ပြီးတော့မှ၊ အလက်ပါတဲ့ ခရမ်းရောင်ကို မျက်ခွံမှာထည့်ပါ။ Dimension ရစေဖို့ အလယ်ကိုများများပိုထည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
မျက်လုံးအပေါ်နား၊ အောက်နားကို ခဲတံလိုင်နာနဲ့ လိုက်ပါ။
အသွင်ဆန်းတဲ့ smokey eye လှလှလေးရပါပြီ။
Tutorial မှာသုံးထားတာတဲ့ products တွေက
NARS Arabian Nights Trio Eye Shadow
NARS Jolie Poupee Duo Eyeshadow
NARS Pandora Duo Eyeshadow
ဒါပေမယ့် brands တွေအကုန်လုံးမှာ ဒီလိုအရောင် တွေ ရှိနေတာဆိုတော့ ဒါကိုသုံးမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို သုံးပြီးခြယ်နိုင်ပါတယ်။
Semester ပြီးခါနီးမှာ assignment တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်နေတာကြောင့်၊ ဘလော့လေးဘက်ကို ခန မလှည့်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပါ။ Christmas ဆိုရင်တော့ အားပါပြီ။ အစဉ်အားပေးကြတဲ့ စာဖတ်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျက်-
သီချင်း လက်ဆောင် (ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားသည်)
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:34 AM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
စိတ်ကူးပေါက်ရာဆွဲပြီး လုပ်ထားတဲ့ သီချင်း သရုပ်ဖော်လေးပါ။ လက်ရာကတော့ မူလတန်း လက်ရာအတိုင်းပဲ။ ပုံဆွဲစာအုပ်မှာ ဆွဲလိုက်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်၊ ထပ်ဖြည့်လိုက်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ ပြန်ဆက်ထားတာပါ။ ပြင်ဆင်ချိန်က စုစုပေါင်း ၃ နာရီနီးပါးကြာပါတယ်။ မကျွမ်းကျင်တော့လည်း အဲလိုပဲ။ :D
ဒီ ဗီဒီယိုလေး မှာသုံးတဲ့ ပုံ ဒါအကုန်ပါပဲ။ စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာစာတည်း ရှိပါတယ်။ :D အရမ်းပညာပါတယ် ထင်ကြမှာစိုးလို့။ ဟီဟိ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အမြင်
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:16 PM အာဒမ်နဲ့ပတ်သက်၍
"မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မြင်တဲ့အခါ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဘာကိုအရင်သတိထားမိလဲ? မျက်လုံးလား၊နှုတ်ခမ်းလား?"အမျိုးသားအယောက် တစ်ရာကို မေးကြည့်တဲ့အခါ ၈၁% က မျက်လုံးလို့ဖြေပြီး၊ ၁၉%က နှုတ်ခမ်းလို့ဖြေပါတယ်။ တခြားဘာတွေရှိသေးလဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။
အမျိုးသားတွေက မျက်လုံးကို အမည်းဆိုးတာပိုနှစ်သက်သဘောကျပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ အရောင်တွေနဲ့ ကစားရတာကို ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ လိုင်နာအပေါ်မှာအရောင်ရင့်တဲ့ ရှဲဒိုးကို ထပ်တာက မျက်လုံးကို ပိုကြီးတဲ့ပုံဆံဖြစ်စေလို့အမျိုးသားတွေ ပိုသဘောကျရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Why We love ရေးသားသူ မနုသဗေဒပညာရှင် Helen Fisher ကဆိုပါတယ်။
မျက်တောင်တုနဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်ဖို့ မကျွမ်းကျင်ရင် နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသားတွေက အတုကြီးမှန်းသိရင် ဘာကိုမှ မကြိုက်လို့ပါပဲ။ သူတို့လိုချင်တာက မြင်ချင်တာက သင့်ရဲ့တကယ့် အလှတရားပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေ အတွက်တော့ မျက်တောင်တုတပ်တာဟာ လူတွေအလယ်မှာ မျက်စိကျစေဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ပညာရှင် Belisa Vranish က ဆိုပါတယ်။
"မိတ်ကပ်ထူလအမ်းကြီးလိမ်းတာ ကျွန်တော့အတွက်တော့ စိတ်အပျက်ဆုံးပါပဲ။"26 နှစ်ရှိတဲ့ Ian ဆိုသူက ပြောပါတယ်။"ဒါပေမယ့် ဘာမှမလိမ်းတာထက်စာရင် lipgloss လေးနဲ့ မျက်တောင်နက်လေးက ပိုလှတယ်မြင်ပါတယ်။"လို့ဆိုပါတယ်။
မိတ်ကပ်နည်းနည်းပါးပါးလိမ်းတာဟာ မိန်းကလေးဆန်မှုကို ဖော်ပြပါတယ်။ နယူးယောက် မိတ်ကပ်ပညာရှင် Amanda Redgraveက အမြင်ပိုလှစေဖို့ မရှိမဖြစ်ပြင်သင့်တဲ့ လေးချက်က မျက်လုံးညိုနေတာ ကွယ်ဖို့ cream concealer ၊ mascara ၊ lipgloss နဲ့ ပါးနီတို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ပန်းသွေးရောင် ပါးပြင်ဟာ ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အချက်ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ခေတ်တုန်းက ပါးအို့နီနီရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ ကျန်းမာတယ်ဆိုတာကို သွယ်ဝိုက်ဖော်ပြပါတယ်။ သွေးအားနည်းတာ မရှိဘူး၊ ကိုယ်ဝန်ကောင်းကောင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပါးနီထည့်တာနဲ့ ပါးအို့နီနီ အသွင်အပြင်ကို ရစေမှာပါ။
မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုတာဟာ ဖိနပ်လို အမြဲတမ်း ဒါပဲ ဝတ်ရင်ငြီးငွေ့လာသလိုပါပဲ အရောင်ဆန်းဆန်း အသစ်ထွက်တာနဲ့ ဝယ်တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့ ဆန်းဆန်းကြီးတွေထက် နဂိုသဘာဝ အရောင် နှုတ်ခမ်းကိုပိုလို့နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ နှုတ်ခမ်းနီ ခဏခဏ အရောင်ပြောင်းသလို၊ ငါတို့ကိုရော ကြာရင်ခေါက်သွားမလား ဆိုတဲ့ အသိဝင်တတ်ပါတယ်တဲ့။
လက်တလောလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အလှအပအမြင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ဦးနောက်နှစ်ခြမ်းလုံးကို အသုံးပြုကြပေမယ့် အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ ညာဘက်ခြမ်း တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေ ဟာ အသေးစိတ် ခြယ်မှုန်းကြတာဖြစ်ပြီး၊ (ဥပမာ ... mascara ထည့်ရင် မျက်ခွံမှာ အစက်သေးသေးလေး အပေ မခံတာမျိုး) ၊ အမျိုးသားတွေကတော့ ခြုံငုံ ကြည့်ပြီး " ဒီကောင်မလေး မိုက်လှချည်လား" ဆိုတာနဲ့ပြီးသွားပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးကို Cosmopolitan မဂ္ဂဇင်း Digital edtion မှ ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အာဒမ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကဏ္ဌလေးကို နောက်အလျင်း သင့်ရင် သင့်သလို တင်ပြပေးသွားဦးမှာပါ။
ပုံမှန်လာရောက်အားပေးတဲ့ စာဖတ်သူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
Choco Dream: Nail Art
By **~ မြတ်ကြည်~** 9:30 AM လက်​သည်း ( nail art )
ပုံကိုကြည့်တာ ခက်မယ်ထင်ပြီး နောက်ပြန်မလှည့်ကြပါနဲ့နော်။ အရင်tutorial လေးတွေလို လွယ်လွယ်လေး ပါပဲ။ လှလည်းလှတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် facebook မှာတင်ထားတာ သဘောကျလို့ လိုက်လုပ်ထားတာပါ။
လက်သည်းဆိုးဆေး အဖြူရောင် နဲ့ အရောင်ရင့်ရင့် တစ်မျိုးမျိုး
ဒီမှာတစ်ခုတိုးတာက ဆံညှပ်ကလစ် အမည်း (bobby pin)
(ကျွန်မဆီမှာ မရှိလို့ ဘီးချွန်ရဲ့ ထိပ်နဲ့ပဲ သုံးလိုက်ပါတယ်)
အရင်ဆုံး အညိုရင့်ရောင်ကို ဆိုးပြီး ခြောက်အောင် စောင့်လိုက်ပါတယ်။
အဖြူရောင်ကို ဘီးချွန် ရဲ့ထိပ် နဲ့ အစက်လေးစက်ချပါ။
သွားကြားထိုးတံကိုယူပြီး အစက်လေးစက်ရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ အခုလို အစက်လေးနှစ်စက်စီ လိုက်ချပါတယ်။
ပြီးရင် ခုနသွားကြားထိုးတံနဲ့ပဲ အဖြူစက်လေးစက်ရဲ့ အတွင်းထောင့်မှာ အညိုရောင် အစက်လေး တစ်ခုစီ လိုက်ချပေးပါ။
ဒီထက်နည်းနည်း ကွန့်ချင်ရင် သွားကြားထိုးတံနဲ့ပဲ အလယ်မှာ အဖြူရောင် ဝတ်ဆံလေး တွေ လိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုလေးပါ။ :) ကြိုက်တယ်ဟုတ်?
ဒါနဲ့ အစ်မဘေဘီရဲ့ ဒီတစ်ပတ် tutorial လေးတော်တော် သဘောကျမိပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ဝယ်ပြီးသွားရင် လုပ်ကြည့်မလားလို့။ ကျွန်မဆီမှာ အရောင် နည်းနည်းလေးပဲရှိတာ၊ ဖြည်းဖြည်း ချင်းတော့ ဝယ်စုနေပါတယ်။ ဒါမှ tutoiral ကောင်းကောင်းလေးတွေ လုပ်ပြလို့ရမှာမဟုတ်လား?
Skin Tone အလိုက် အရောင်ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် နှစ်သစ်...
BB Cream: ကိုရီးယား မင်းသမီးများရဲ့ အသားအရေ အလှ လှ...
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အမြ...